CIN Khabar काम कम छैन तर ज्याला अझै बराबर भएन
काम कम छैन तर ज्याला अझै बराबर भएन समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति छ, तर कार्यान्वयन छैन (अडियोसहित)
ईश्वर साउद मंगलबार, मंसिर ९, २०७७, ०८:०८:००
तस्बिर : गीता चिमोरिया ।
कानुनले भन्छ, ‘समान काम, समान ज्याला ।’ तर कैलालीको टीकापुरमा लिङ्गकै आधारमा ज्यालामा विभेद छ । लैँगिक विभेदका कारण महिला र पुरुषबीच ज्यालामा भिन्नता हुँदा ज्यालादारीमा निर्वाह गर्नुपर्ने महिला मारमा छन् ।
टीकापुरका कृष्णा चौधरी र दिपेश चौधरी एउटै खालको काम गर्नु हुन्छ । दुवैजना मिस्त्रीलाई बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट पु¥याउने काम गर्नुहुन्छ ।
भारी उस्तै, काम गर्ने समय पनि एकै छ । तर उहाँहरूले पाउने पारिश्रमिक भने एक सय रुपैयाँले फरक छ ।
महिला भएकै कारण तपाईले एक सय कम पाउनु हुन्छ भनिएको छ तर त्यसो किन भयो होला ? कृष्णा चौधरीले थाहा पाउन सक्नु भएको छैन ।
कृष्णाले भन्नुभयो, ‘मैले काम गरेको ८ वर्षजति भयो । दुईसयमा सुरु भएको थियो, बढ्दै जाँदा अहिले ४ सय ६० रुपैयाँ छ । खोजेको त बराबरी नै हो । बराबरी भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचार त हाम्रो पनि हो । खै, पुरुषलाई र महिलालाई किन पो छुट्याइन्छ ? काम त बराबर गरिरहेका छौं । रेटचाहिँ बराबर हुँदैन हाम्रो । रेटमा फरक छ ।’
महिलाहरु पनि पुरुष सरह बिहान सबेरैदेखि साँझसम्म काम गर्छन् । तर ज्याला पाउने बेला पुरुषले बढी पैसा बुझ्दा नमिठो लाग्ने गरेको कमलादेवी चौधरी बताउनुहुन्छ ।
कमलाले भन्नुभयो, ‘काम गर्दाखेरी पुरुषलाई पाँच सय रुपैयाँ दिन्छन् त, महिलालाई चार सय रुपैयाँ दिन्छन् । हामीलाई पनि त मार्का प¥यो, हाम्रा बालबच्चा हामीले कसरी पढाउने हो ? लेखाउने हो ?’
एउटै काममा समान ज्याला नपाउँदा कमला, कृष्णा जस्ता सयौं महिला दुःखी छन् । थाहा पाएर पनि काम गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो । असमान ज्याला मजदुरको नियति बनेको छ ।
श्रीमान श्रीमती एकै काममा लाग्दा कामको ज्याला भने एक सय रुपैयाँले फरक पाउने गरेको टीकापुरका दिपेश चौधरीले बताउनुभयो ।
‘सुरुमा चार सय पाउँथ्यौं, अहिले पाँच सय छ । ज्याला त एउटै हुनुपर्ने हो । तर महिला र पुरुषलाई अलग अलग गराइदिएका छन् । बराबर दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
टीकापुर नगरपालिकाले निर्धारण गरेको दररेटमा ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुका लागि न्यूनतम ५ सय ८० रुपैयाँ ज्यालादर तोकेको छ । तर ठेकेदारहरुले पुरुषलाई ५ सय ८० नै दिएपनि महिलालाई भने घटाएर ४ सय देखि सय ६० सम्म दिने गरेका छन् ।
त्यसो किन गरेको ? ठेकेदार मुन्सी भन्नुहुन्छ, ‘खास हजुरको महिलाको चार सय, पुरुषको पाँच सय हो । तर यसमा पुरुष र महिलाको पनि काम हेरेर हुन्छ । मैले त कतिपय महिलाहरूलाई पाँच सय रुपैयाँ पनि दिएको छु ।’
स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहको प्रमुख संयोजक रहने गरी स्थानीय ज्याला निर्धारण समिति गठन गरिएको हुन्छ । टीकापुर नगरपालिकामा पनि नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा ज्याला निर्धारण समिति गठन भएको छ ।
त्यो समितिले निर्धारण गरेको दररेटमा पनि एउटै प्रकृतिको काम गर्ने महिला र पुरुषलाई एउटै ज्याला तोकीएको छ ।
टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावल कार्यक्रम हामो पालिकाले उठाएको सवालपछि अब एकै ज्यालादर लागू गराउन विशेष कदम चाल्ने बताउनुहुन्छ ।
रावलले भन्नुभयो, ‘कतिपय ठाउँमा असमानता देखिएको छ । असमानता भन्दा पनि हामीले तोकेको रेटभन्दा उनीहरू आफैं मनखुशीले अथवा भनौं न आफैं सम्झौताका आधारमा गर्ने खालको कुराहरू बेला बेला हामीलाई पनि आइराखेको छ । डकर्मी संघ लगायत सम्बन्धित् पक्षहरूलाई बोलाएर हामी एकपटक यो कुरा सम्झाउँछौं । ’
रावलले अगाडी थप्नुभयो, ‘फेरि हामीलाई लिखित रुपमा त्यस्तोखालको कुनै पनि उजुरी आएको छैन, कारबाहीमा जाउँ, प्रक्रियामा जाउँ भन्नको लागि । हामीलाई विभेद भयो भन्ने खालको कुनै उजुरी आएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’
नेपालको संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने कुरा उल्लेख छ ।
त्यसै धाराको उपधारा ४ मा समान कामका लागि लैँगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।
तर लेखिएको त्यो कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरू अझै विभेद भोगिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ९, २०७७, ०८:०८:००